မဟာသမယသုတ်များ – ဝင်းမေတ္တာ
ညနေ (၂၄၇) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၇)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၇) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၇) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်လိုစိတ်ထားဖြင့် နားထောင်သူသည် “အကျိုးရှိသောစကား” ၊ “အကျိုးမရှိသောစကား”လို့ ခွဲခြားသိနိုင်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၆) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၆)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၆) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၆) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကို အောင်နိုင်ခဲသောအရာကို အောင်နိုင်သူဟု ဆိုရပါသလဲ? အဘယ်သို့နေလျှင် မိမိသူတစ်ပါး နှစ်ဦးသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်သူဖြစ်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၅) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၅)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၅) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၅) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်အရာကို ဖြတ်လျှင် ချမ်းသာစွာ နေရသလဲ? ဘယ်အရာအား ဖြတ်တောက်ခြင်းကို သင်နှစ်သက်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၄) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၄)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၄) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၄) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ မိတ်ဆွေအစစ် မိတ်ဆွေကောင်းလို့ သိနိုင်သော အကြောင်းတို့သည် ဘယ်အရာများ ဖြစ်ကြပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၃) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၃)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၃) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၃) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်သူသည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သည် မည်ပါသလဲ? အဘယ်သူသည် မိမိကိုယ်ကို မစောင့်ရှောက်သည် မည်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၂) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၂)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၂) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၂) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်သူသည် မိမိကိုယ်ကို ချစ်အပ်သည် မည်ပါသလဲ? အဘယ်သူသည် မိမိကိုယ်ကို မချစ်အပ်သည် မည်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၁) – ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၁)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၁) မဟာသမယသုတ်များ ပညာစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်း (၁) (ပုရာဘေဒသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၁၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ မထီမဲ့မြင် မပြုအပ်သောအရာလေးပါးတို့သည် အဘယ်တို့ဖြစ်ကြပါသလဲ? အဘယ်တရားတို့သည် ကိုယ်တွင်း၌ဖြစ်လာလျှင် အကျိုးမဲ့ဖြစ်ကြပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
ညနေ (၂၄၀) – သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်းအပိုင်း (၈)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၄၀) မဟာသမယသုတ်များ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူတို့အတွက် ကျင့်နည်းအပိုင်း (၈) (တုဝဋကသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ် ၊ ၄၂၁ ) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်သူသည် နေ့ရောညပါ မပျင်းရိသည်ဖြစ်၍ သံသရာတည်းဟူသော ရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ပါသလဲ? အဘယ်သူသည် ထောက်တည်ရာမရှိသည့် နက်လှစွာသော သံသရာရေအလျဉ်၌ မနစ်မြုပ်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု